Network နှင့်ပတ်သတ်၍... [Article]
Myanmar IT Resource Forum » GENERAL TECHNOLOGY » » Network Engineering » Network နှင့်ပတ်သတ်၍... [Article]
1 Network နှင့်ပတ်သတ်၍... [Article] on 8th April 2010, 12:18 pm
Router ကတော. Switch နဲ.ကွာခြားချက်တွေရှိပါတယ် ။ သူ.မှာ Function တွေပိုစုံလင်ပြီး သူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ ၊ တခြား စက်တလုံးဖြစ်စေ ၊ နက်ဝက် တခုကိုဖြစ်စေ သွားရောက်ဖို.အတွက် သက်မှတ်ပေးနိုင်ပါတယ် ။ ပြီးတော. ရောက်ရှိလာတဲ. နက်ဝက် ရဲ. Speed ကို ပြန်ပြီး Routing အနေနဲ. တိုးပေးပါတယ် ။ အဲ.အတွက် နက်ဝက် ၂ခု ချိတ်ဆက်ရာမှာပိုပြီး လျှင်မြန်စေပါတယ် ။ Wireless router တွေကတော. ၁၀၀ မီတာ ကနေ ၂၀၀ မီတာ လောက်ကို point to point ကို access လုပ်နိုင်တယ် (ကြားခံ နံရံများ ၊ ပိတ်ဆို.မူများရှိရင်တော. မိတာ ၁၀၀ က အကောင်းဆုံးပါ ) ။ ဥပမာ ပေးရရင် ... ရပ်ကွက်တခုမှာလာတဲ.ဧည်.သည် ကို အိမ်တိုင်ရာရောက်လိုက်ပို.ပေး သလို ၊ သူ ကိုယ်တိုင် ကို က ရပ်ကွက် တခု တည်ထောင် နိုင် ပါတယ် ၊တခြားရပ်ကွက် က အိမ်ကို ပါ (သတ်မှတ်ပေးထားရင်) သူ လိုက်ပြနိုင် ပါတယ်။ (ရှင်းလားတော. မသိဘူး ... အပီား ဒီထက်လဲ မရှင်းတတ်တော.ဘူး )
ပာုတ်ပြီဗျာ .. ကျနော်တို. ပို.ဆောင်ဖို.အတွက် အရာတွေအားလုံး ထုတ်ပိုးလို.ပြီးသွားတဲ. အချိန်မှာ ကျနော်တို. ဘယ်ကို ပို.မှာလဲဆိုတာ ကလိုအပ်လာပါတယ် ။ အင်းလေးလား ၊ တောင်ကြီးလား ၊ မန္တလေးလား ၊ ပြင်ဦးလွင်လား ။ ဘယ် အရပ်ဒေသ ကို ပို.ဆောင်မှာလဲ ??? ။ ဘယ်သူကကျနော်တို. ပို.မဲ. ပစ္စည်းတွေကို လက်ခံယူထားမှာလဲ ??? ။ ရှင်းပါတယ် ။ ပို.ချင်တဲ. နေရာ နဲ. လက်ခံမယ်.သူ နံမည်ကို ထည်.ပေးလိုက်ယုံပါပဲ။
IP address ဆိုပြီးနံမယ် ကိုတော. အင်တာနက်သုံးတဲ.လူတိုင်း နီးပါးသိကျမှာပါ ။ှုIP ADDRESS က ဘာလဲ ရှင်းပါတယ် ။ Internet Protocol ရဲ. လိပ်စာ ပေါ.ဗျာ ။ ကျနော်တို. အပြင်မှာ စာပို.တော.မယ်ဆိုရင် စာအိတ်ပေါ်မှာ အိမ်နံပါတ် ၊ လမ်း ၊ ရပ်ကွက် ၊ မြို့နယ် ၊ တိုင်း ၊ နိုင်ငံ ဘာညာကွိကွ တွေရေးပေးပြီး ပို.ပေးရသလိုမျိုး IP address မှာလည်း internet protocol မှ သတ်မှတ်ပေးထားသော format ရှိပါတယ်။ IP address တွေက 32 bit binary ဂဏန်းတွေတွေပါ ။ စက်အချင်းချင်းနားလည်တဲ. ကိန်းဂဏန်းတွေနဲ. ဖော်ပြပေးတာဖြစ်ပြီး လူတွေအသုံးပြုရလွယ်ကူအောင်လို. Decimal ဂဏန်း တွေနဲ. အစားထိုးသုံးပြုပါတယ် ။
0001 = ၁ ဖြစ်ပြီး 0010 = ၂ ဖြစ်သွားပါတယ် ။ အလားတူစွာ 0011 = ၃ ဖြစ်သွားပါမယ် ။ အသေးစိတ်လေ.လာချင်ရင်တော.
မှာ လေ.လာနိုင်ပါတယ် ။
အသေးစိတ် လေ.လာချင်ရင် တော.
မှာ ဖတ်ရူနိုင်ပါတယ် ။
မှာပါ ။ အသေးစိတ်လေ.လာချင်ရင် တော.
မှာလဲ pdf ဖိုင်ကို ဒေါင်းလုဆွဲပြီး လေ.လာလို.ရပါတယ် ။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင်. ကျနော. ရှင်းပြချက်များ မရှင်းလင်းတာတွေ ၊ နားမလည်တာတွေ ဖြစ်ခဲ.ရင် ကျနော် ရှင်းပြမူ.အားနည်းနေတဲ.အတွက်တော. ခွင်.လွတ်ပါ ။ )
အဲ့ဒီ data ပေးပို့မှုဖြစ်စဉ်သည် millisecond အတွင်းပြီးမြောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက data သွားပုံလမ်းကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။ကွန်ပျူတာတစ်လုံးနှင့်တစ်လုံး communicate လုပ်ပုံကို logically အရကြည့်မယ်ဆိုရင် layer တူအချင်းချင်းသာ communicate လုပ်ကြပါတယ်။ဆိုရရင် ကွန်ပျူတာတစ်လုံးမှ application layer protocol သည် တစ်ဖက် ကွန်ပျူတာ၏ application layer protocol ဖြင့်သာ information တွေဖလှယ်ကြပါတယ်။ အခြား layer protocol များသည် Application layer ၏ data တွေကို ၀င်ရောက်စွက်ဖက်ဘို့ရန်မကြိုးစား ကြ ပါဘူး_____________________________________________________________________________________________ဲ……. ကိုယ့် Computer မှာ Network Card မရှိပဲနဲ့Virtual Network လုပ်ချင်ရင် ဒီလို လုပ်လို့ ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော် အရင်က ကျွန်တော့် Computer မှာ network card နှစ်ကဒ်မရှိလို့ ၊ connection မရှိလို့Networking Practical လုပ်ဖို့လွန်ခဲ့ တဲ့ နှစ်တွေတုန်းက တော်တော်စားခဲ့ တယ်။ Network Card နှစ်ကဒ်ကို Loop ကြိုးလုပ်ပြီးတစ်မျိုး၊ တစ်ကဒ်ထဲကိုပဲ Loop ဖြစ်အောင် လုပ်ပြီး တစ်ဖုံ သုံးခဲ့ရပါတယ်။ တကယ်တော့ Microsoft က Network Card တစ်ခုမှ မလိုလဲ Virtual Network အတွက် Network Connection ယူလို့ရအောင် လုပ်ထားပါတယ်။ Practical လုပ်ဖို့ တော်တော်လေးအဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်။ ကဲ AD တို့ ဘာလို့ ညာတို့ ကို စမ်းလို့ ရပြီဗျာ။
Last edited by ထက်နိုင် on 7th August 2010, 6:06 pm; edited2times in total
2 Re: Network နှင့်ပတ်သတ်၍... [Article] on 8th April 2010, 12:35 pm
ကို pooqee ရေ ......
နောက်ခါ ဆိုးတော့နဲ့ နော်
3 Re: Network နှင့်ပတ်သတ်၍... [Article] on 8th April 2010, 12:46 pm
အား ငါလည်း ပေးမယ်ဆိုပြီး မေ့သွားတယ် ကွ သူများတွေ သိစေချင်လိုပါ မင်း ကလည်း နည်းနည်း တော့ ကူညီ ပါကွနော် ဟဲ ဟဲ ဟိုနေ့ ကျရင် မင်းကို တိုက်ပါမယ့်ကွနော် ငါ ကို မင်း gmail ac ပေးပါလာ ဒါမှမဟုတ် ငါအကောင့်ကို မင်း အပ်လိုက်လေ [You must be registered and logged in to see this link.] ကို နော်
4 Re: Network နှင့်ပတ်သတ်၍... [Article] on 7th August 2010, 11:26 am
ကျေးဇူးပဲအကို ဒါနက်ဝက်ရဲ့အခြေခံ ပါပဲ တော်တော်များများ ဒီအဆင့်ကိုသိမလိုလိုနဲ့ကျော်သွားတယ်ဗျ ကျွန်တော့ကိုကျွန်တော်ပြောတာနော် သူများတွေကိုပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူး
5 Re: Network နှင့်ပတ်သတ်၍... [Article]